02/10/2018 - Page 3 sur 4 -
Mozika jazz : Hanomboka rahampitso ny Madajazzcar
Ambohi-pihaonan’ny jazz i Madagasikara rehefa volana oktobra toa izao. Taorian’ny volana aprily lasa teo, izay nanatanterahana ny andiany faha-28, izay voatery nahemotra noho ny valanaretina petsa, hanomboka rahampitso, ary haharitra hatramin’ny 13 oktobra izao ny …Tohiny
Fampirantiana Madagascar : Fitsidihina an-tsary ny any Paris
Nanomboka ny 18 septambra teo ka hatramin’ny janoary 2019, dia aranty ao amin’ny tranombakoka Quai Branly any Paris Frantsa, ny vakoka sy ny kolontsaina malagasy nampisalorana ny lohateny hoe “Madagascar”. Na dia any amin’ny 8500km …Tohiny
Toamasina : Sahirana ny mpandeha vao mahita taksiborosy
Tsy mampino. Tsy misy intsony ny fiara taksiborosy mitatitra mpandeha mihazo an’i Toamasina miala avy eo Ambodivona, Antananarivo. Mangadihady ny fiantsoanana isaka ny kaoperativa noho ny tsy fisian’ny fiara. Marobe anefa ireo olona no tonga …Tohiny
Miarinarivo : Dahalo 3 nadoboka am-ponja
Telolahy mpampihorohoro vahoaka, sady havanana amin’ny resaka fanafihana mitam-piadiana any amin’ny tanànan’Andolofotsy distrikan’i Miarinarivo ireto voasambotra, ny alakamisy lasa teo ireto. Ankoatra ny fanafihafihana mitam-basy, efa tsy zoviana amin’ny fokonolona intsony izy ireo amin’ny resaka …Tohiny